संविधान सिध्याउन निर्वाचनको प्रपञ्च रचियो : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान सिध्याउन तथाकथित निर्वाचनको घोषणा गरेको दावी गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान सिध्याउन हुँदै नहुने निर्वाचनको घोषणा गरेको नेता पाण्डेको आरोप छ।
‘चुनाव हुन्न म स्पष्ट छु, गराउन भनेर चुनावको घोषणा भएकै होइन,’ उनले भने,‘चुनाव गर्नलाई घोषणा गरेकै होइन, संविधान सिध्याउन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो।’ दुई पार्टी मिलेर निर्वाचनमा गएको अवस्थामा पनि दुई तिहाइ आउन नसकेको अवस्थामा अहिले ओलीले एक्लै कसरी दुई तिहाइ ल्याउलान् ? भन्दै उनले प्रश्न गरे।
‘दुई वटा पार्टी मिलाएर पनि दुई तिहाइ आउन सकेन। अहिले प्रधानमन्त्री दुई तिहाइ ल्याउँछु भनेर चुनावमा गएको होइन,’ पाण्डेले भने,‘हिजो एक भएका दुईटा पार्टी अब अलग्गै लड्छन्। त्यहाँ आउँछ दुई तिहाइ ? चार महिनापछि प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नलाई केपी ओलीले विघटन गरेको हो? कदापि होइन्।’
पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बस्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुको धेय संविधान सिध्याउनुबाहेक अरू केही नरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसदको विघटन होइन, संविधानको विघटन हो,’ उनले थपे, ‘पाँच वर्षमात्रै किन? सके जति पनि बस्दा भइगो नि। जनताले आन्दोलनबाट नफ्याँकुन्जेल बसिरहन पाइयो नि।’